1 Umxokozelo facetime for windows PC kunye Laptop 32bit – 64bit
1.1 Isicelo Windows:
1.2 FaceTime Iimpawu:
1.3 Ezinye Iimpawu ebanda FaceTime
2 Iimfuneko FaceTime:
Umxokozelo facetime for windows PC kunye Laptop 32bit – 64bit
Hello Facetime Ndilikhoboka! Ukuba fan enkulu le app facetime yaye usebenzisa kwi iPhone yakho MacBook ke kwakhona ungafumana le app kwi pc yakho window.
Ngandlel kufuneka ulandele amanye amaqhinga ukuba download uze ufake Facetime kwi pc yakho Window.
Ngoko Eli nqaku linika zonke iinkcukacha eziyimfuneko eziya kukufundisa indlela ongenza ngayo download kwaye ufake facetime on Non-iOS neqonga ezifana Windows 7, 8 kunye Window 10.
FaceTime yenye yezona abadumileyo yevidiyo nomsindo ubizo app Apple ukuba. Mandulo, abantu babesebenzisa ukuba ezinxulumene omnye nomnye ngoncedo phones emveli okanye eziphathwayo kodwa FaceTime iye kakhulu awuyitshintshanga le ntsingiselo. Ngoku abantu lula ukwenza iminxeba, imiyalezo kunye iminxeba nokuba ividiyo ngoncedo le app Facetime.
Oku kukuvumela ifowuni yakho ukuba uqhagamshele kwabanye nge inethwekhi yeselula okanye uqhagamshelwano Wi-Fi. It ivumela abasebenzisi ukuba wenze ividiyo ubiza mda kubahlobo babo, usapho kunye ishishini abafowunelwa iPod inkxaso, iPhone, iPad, Mac okanye Windows nge videotelephony online.
iye emangalisayo Le app zasinciphisa imigama phakathi kwabantu kwaye kube lula kakhulu ukuba sihlale siphefumlelana ebomini zakho and professional.
ekuqaleni, Apple yaqulunqa isicelo iOS and Mac izixhobo zayo os yaye kamva kwi, ngenxa yokuthandwa kwayo, ke ngoku iyafumaneka ukuze windows ngokunjalo.
Kodwa ukuba le app kwi window lwakho kufuneka ufakelo wesithathu. Kweli nqaku, siya nilahlekelwe ufakelo stepwise lesi sicelo ukuba zisetyenziswe ngaphakathi windows.
Ukuba ufuna ukwazi ngayo nangakumbi, nceda uqhubeke ufunda inqaku zethu. Siza kwakhona ukwabelana ezinye iinkcukacha ezifundisayo kunye umdla malunga nale sicelo.
Ekupheleni kweli nqaku, uya kunandipha Facetime wakho okuthandayo app kwi windows lwakho
FaceTime isiba enye ividiyo apps coolest ngokubiza zeefoni video online kunye nazo zonke ezinye okhuphisana enkulu njenge kuye kwaba Google Duo, Skype, WhatsApp, Imo, bingo kwaye uluhlu. Le app ugwetyelwa kubalulekile ukubonelela umgangatho ophezulu kunye neziphumo okubonakalayo nomsindo kuhambelana.
Enye inkalo wokhuphiswano le app is it has umsebenzisi-friendly interface. Abanye impahla ezithambileyo kwi software yeemalike awukwazi ukunika ukuba bandwidth.
Iinkampani zeqela lesithathu bakhululwa software ukuze kube lula ukuba wonke umntu ukufaka isicelo Apple kaThixo ezisemthethweni kwi Windows 7 okanye kamva. ngoku, kuyenzeka ukuba FaceTime ukusuka window ukuya iPhone, kwee window ukuya iPad, kwee window ukuya Mac & kwee window ukuya kweyangoku i window.
Yonke into oyifunayo unxulumano engqinelanayo intanethi isicelo ngokupheleleyo indleko ukusebenzisa kwi windows.
FaceTime app mkhulu zonke ezinye software videotelephony njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Imifanekiso ke libukhali kakhulu nokubonwayo high definition ezi likhubalo ukuba kufakwe endaweni zonke ezinye iinketho ezikhoyo kwimarike online.
Ezinye Iimpawu ebanda FaceTime
FHD- Ingcaciso Full high ezibonwayo ngoyena ndoqo isicelo.
Friendly umsebenzisi-interface yenza kube obuthe chatha ukuba abasebenzisi
Ukusetyenziswa ililungiselelo lokukhula ukwazi ukuqhagamshela naphi na, nanini na.
Easy uhlele uluhlu lwakho zoqhagamshelwano
uluhlu oluthandayo yabafowunelwa bakho kunceda ube ufikelela nje unqakrazo olunye
Free ubizo iindleko yenye indawo plus yokuba ahlale elidityaniswe.
Group ividiyo ubizo ikwenza ukwazi ukuqhagamshela abasebenzisi ezininzi ngexesha elinye.
Imiyalezo kwakhona kunokwenzeka nesicelo.
Abathumela kunye nabasebenzisi ezingabalulekanga zinokufihlwa okanye ababhlokiweyo kuluhlu.
Abasebenzisi ukuqhagamshela izixhobo ezahlukeneyo ezifana PC, Windows, iPhone, iPad, iPod, IMac.
Ezi amehlo kangangokuba siqinisekile ukuba abafundi bethu singathanda ukuba isicelo zezi. Kubalulekile ukuqonda iimfuno ezisisiseko phambi kokufaka app FaceTime for windows. Iimfuneko ezingundoqo zibandakanya
Wakho iifestile uguqulelo kufuneka ubuncinane XP. Ukuze ukwazi kangcono, siza sicebisa ukuba kufuneka abe neefestile & okanye kwiinguqulelo kamva.
the speed CPU kufuneka ibe ngaphezulu kuno 1GHz.
the i-RAM kufuneka ubuncinane 2 GB okanye ngaphezulu.
Kukho kumele elisekelwe eyakhelwe-ngaphakathi camera yevidiyo lobizo okanye ukufumana ikhamera ephathekayo ngenxa yale njongo.
Kuba ukushaya komsindo, kufuneka ube microphone. Privacy ochaphazelekayo abasebenzisi kufuneka basebenzise headphone eyakhelwe-ngaphakathi imibhobho.
Eyona nto ibalulekileyo kukuba ukuze babe amahle -intanethi.
Njengoko kuchaziwe ngaphambili ukuba FaceTime yi esemthethweni lokusebenza lwe Apple kunye ababhekisi phambili abangakhange kukhululwa naluphi uguqulelo for windows kuphela.
Ngoko ungafumana kuphela esi sicelo kwi-website esemthethweni kwifomati APK esetyenziselwa zonke izixhobo iOS and Mac. Ngethamsanqa Windows, esinayo ezinye iinkqubo ezikhoyo online ukuyifaka ngeenkqubo zeqela lesithathu.
Makhe ukwabelana abafundi bethu apha inyathelo ngenyathelo iinkqubo ukulanda apha:
emulators Android baye bakhululwa yi ababhekisi phambili zeqela lesithathu ukufaka ifomati eyahlukileyo. Ezi software izicelo ikuvumela ukuba usebenzise iifayile format APK of FaceTime kwi windows yakho. Ukuba sele ifakiwe kwindlela yakho, silandela inkqubo. Ngokuba newbies, nceda download BLUESTACKS ukusuka ikhonkco enikwa:
Oku ikhasi lasekhaya www.bluestacks.com i
Le nkqubo kunye software ezisemthethweni ngokupheleleyo ukuze uhlale ukhululeke.
Ubungakanani ifayile enkulu ngu. 469MB yaye kuya kuthatha ixesha ukuze ezantsi.
Emva ilandwe, uyifake kwaye xa kwenziwa, qala iifestile zakho.
isicelo bluestacks Vula kwi menu ekuqaleni. Kuya kuthatha ixesha ukuqalisa okusingqongileyo kunye sync engagqibekanga apps yokuqala ezibonelela yilenkqubo. Ngoko ke musa ukuphazamisa lenkqubo yokuqala.
Xa isimiso siqala, yiya kwi menu kunye nqakraza kwi izicelo ivenkile yokudlala.
Kwi ivenkile play, ukufumana Ixesha lokujongana kwi the search ukhetho.
Download le app kwaye ucofe ku "run"Ukuze ngqo ufake isicelo. Ungasebenzisa kwakhona ukugcina download ifayile Ukuba unqwenela ukufaka ngelinye ixesha.
Xa ukulungele ufake isicelo kwindlela yakho oyisebenzisayo kwaye ulandele imiyalelo.
Ngexesha lenkqubo yofako, ungacelwa ukuba amalungelo umlawuli okanye igama umlawuli okanye isiqinisekiso. Nceda ubhale igama elifunwayo okanye ulwazi wabuza.
Ekugcineni, FaceTime ukulungele ukuba ukusebenzisa kwakho windows.
Dala kumsebenzisi yakho Id kunye nephasiwedi kwaye lowo uya kusetyenziswa xa ngaba ungathanda ukuba ungene.
Xa uza kuqhuba le app okokuqala, uya kuyalelwa ukuba ufake umsebenzisi ID ne-password. Njengoko sele udale yakho unique user ID ne-password, kuya kufuneka apha ukuze isebenze olungaphezulu lweprogram. Xa sokuqala inkqubo indalo ID eyahlukileyo kwenziwa, interface eziphambili ziya kuboniswa.
Bonke abo uqhagamshelana nabo ongeze, efihliweyo okanye ababhlokiweyo balawulwa ukusuka interface engundoqo. Yiya ezikhethwa belucwangcisiwe ku ngokusesikweni njengoko ngokweemfuno zakho. like iPhone, iPad, iPod & IMac, unako nako ukudlala ukubonisa isicwangciso. Apha awuna ukutshintsha ikhusi na kodwa unako ukwenza utshintsho kunye iinketho ezikhoyo.
Ukuba usebenzisa FaceTime okokuqala waza wafuna ukwazi ngayo nangakumbi, kwakhona tyelela iwebhu yabo inkxaso ulwazi oluneenkcukacha. Ikhonkco unikwa ngezantsi:
Izinto ezintsha uye wanceda abantu ehlabathini jikelele aziwayo ngaphezulu kunye nokuhambela. FaceTime ayikho malunga nomfo ibhiya okanye imagi kwaye wabelane ngayo ubomi kunye nabahlobo bakho kunye nosapho kuphela.
kakhulu Kuye yanceda kwimarike yamazwe ngamazwe ukuze uhlale uhlobene nenye.
Apple njalo ukukhupha iinguqulelo ezintsha ze FaceTime ngeziphumo engcono ngakumbi okutya iimfuno yomsebenzisi.